Famahana olana samihafa: ilain’ny fiarahamonina ny psykology | NewsMada
Famahana olana samihafa: ilain’ny fiarahamonina ny psykology
Par Taratra sur 22/02/2019
Nampahafantarina, omaly teny Antaninarenina, ny fijoroan’ny Holafitry ny psykology, ahitana mpikambana 17 mianadahy. Natao izany ho fiarovana ny olona noho ny fisian’ireo mitonona ho manao ity asa ity kanefa tsy nianatra manokana momba izany akory, araka ny fanazavan’ny filohany, Andrianilaina Koloina. Tokony hiditra ho mpikambana ao amin’ny holafitra avokoa ireo psykology mahafeno ny fepetra.
Samy manana ny maha izy azy ny psykology sy ny “psychiâtre” ary samy hafa ny fomba fiasan’izy ireo. Mamaha ny olana amin’ny saina, amin’ny alalan’ny fifampiresahana, iry voalohany, raha toa ka mpitsabo na dokotera, manome fanafody mifandraika amin’ny aretina kosa, ilay faharoa. Nianatra manokana ny psykology ary maharitra dimy taona na mihoatra izany. Mampianatra azy ireo eto amintsika: ny oniversiten’Ankatso sy ny UCM.
Tena ilain’ny fiarahamonina na ny olona tsirairay, amin’ny ankapobeny, izy ireo. Sahaniny avokoa ny olana momba ny tokantrano, ny ankizy, ny mpivady; ny olana eo amin’ny sehatry ny asa; ny eo amin’ny fanabeazana; ny any amin’ny toeram-pitsaboana; ny eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena. Ilain’ny fikambanana, miasa amin’ny sehatra samihafa, koa ny psykology.
Araka ny voalazan’ireo psykology, efa manomboka manatona azy ireo ny Malagasy, raha vitsy ihany izany teo aloha, noho ny fahatsapana fa ilaina izy ireo amin’ny famahana olana samihafa. Betsaka indrindra ny olan’ny mpivady tonga any amin’ny psykology. Eo koa anefa ny momba ny ankizy,tsy mifantoka loatra amin’ny fianarana na tsy maharaka ka itadiavam-bahaolana amin’ny saina.
Heverin’ny olona ho lafo ny sarany any amin’ny psykology. Miezaka hatrany manatona ny vahoaka izy anefa ireo ary efa misy ny psykology mpiasam-panjakana.